Black Forest သို့ ခရီးသွားရန် အကြံပြုချက်များ ခရီးသွားသတင်း
Black Forest သို့ ခရီးသွားရန် အကြံပြုချက်များ
Mariela Carril | | Alemania, အကြံပေးချက်များ
ဂျာမဏီ၏ အလှဆုံးဒေသများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ သစ်တော. တောထူထပ်သော တောအုပ်များ၊ ဒဏ္ဍာရီပုံပြင်များ ရွာများ၊ ရေပူစမ်းများ၊ လမ်းများနှင့် အစာအိမ်ဗေဒပညာတို့ကို မည်သူက နှစ်သက်မြတ်နိုးနိုင်မည်နည်း။
ဤဒေသသည် ဂျာမနီနိုင်ငံ အနောက်တောင်ပိုင်း၊ Baden-Württemberg တွင်ရှိပြီး ယနေ့ ကျွန်ုပ်တို့သည် အလွန်ကောင်းမွန်သောနေရာတွင် ရပ်တန့်ပါမည်။ Black Forest သို့သွားရောက်လည်ပတ်ရန်အကြံပြုချက်များ။ ပန်းတိုင်ယူပါ
2 Black Forest သို့ ခရီးသွားရန် အကြံပြုချက်များ
မူအရ Black Forest ပါ။ အလွန်သစ်တောထူထပ်သောတောင်တန်းတစ်ခုဖြစ်သည် ထိုအချိန်သည် အနက်မှ တစ်ခုဖြစ်လာသည်။ ဂျာမနီ၏ အဖိုးတန် ခရီးသွားနေရာများ.
သစ်ပင်အများစုသည် တစ်ခုနှင့်တစ်ခု တိုးဝင်၍ ထူထပ်သော သစ်တောများအဖြစ် ပေါက်ရောက်သော ထင်းရှူးပင်များဖြစ်သည်။ အခြားသီအိုရီတစ်ခုအရ ရောမလူမျိုးများသည် ထိုတောင်တန်းများကြားမှ လမ်းများမှောင်မိုက်ခြင်းကို သတိပြုမိကြသည့်တိုင် ရောမလူမျိုးများသည် ဤဒေသ၏အမည်ကို မည်သည့်အရပ်မှ လာသည်ဟု လူအများက ဆိုကြသည်။
Black Forest သည် ဂျာမနီ၊ ပြင်သစ်နှင့် ဆွစ်ဇာလန်တို့ တွေ့ဆုံရာနေရာမှ စတင်သည်။ ဂျာမနီနိုင်ငံ၏ မြောက်ဘက် ကီလိုမီတာ ၁၆၀ ခန့်အကွာတွင် ကီလိုမီတာ ၃၀ မှ ၆၀ ကြား ရှည်လျားသော သစ်ပင်ပန်းမန် အစုအဝေးကို ပုံဖော်ထားသည်။ မြစ်သုံးစင်း၊ လှပသော ရေကန်များ၊ ရေပူစမ်းများ ရှိပြီး ရာသီဥတု ဖောက်ပြန်မှုမှာ ထင်ရှားသည်မှာ အလွန်တောင် ထူထပ်လှသည်။ အေးမြသောနွေရာသီနှင့် အေးခဲသောဆောင်းရာသီ.
Black Forest သည် ဒေသဆိုင်ရာ ၀တ်စုံများ၊ ပွဲတော်များ၊ ပါတီများနှင့် အစားအသောက်ဆိုင်ရာ အစားအသောက်များဖြင့် အချိန်နှင့်အမျှ ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင် ယဉ်ကျေးမှု စရိုက်များကို ဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။ ခရီးသွားလုပ်ငန်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ ယနေ့ခေတ်မှာ ရေကန်ဘေးမှာ ရှိနေတဲ့ အရာအားလုံးဟာ လေထီးစီးခြင်း၊ တောင်တက်ခြင်း၊ မီးပုံးပျံစီးခြင်း၊ ကယက်လေ့လာရေးခရီး၊ နှင်းလျှောစီးခြင်း၊ မြင်းစီးခြင်း...
ပထမဆုံး မင်းဒီကိုရောက်ရမယ်။ ဂျာမနီကို လေယာဉ်နဲ့ရောက်ရင် Frankfurt မြို့ကို ကောင်းကောင်းဝင်လို့ရပါတယ်။ Baden-Baden၊ Karlsruhe၊ Offenburg နှင့် နိုင်ငံရှိ အခြားမြို့ကြီးများနှင့် အလွန်ကောင်းမွန်စွာ ဆက်သွယ်ထားသည့် Freiburg သို့ ရထားစီးပါ။
အခုတော့ အကယ်၍ သင်သည် ဥရောပသို့ရောက်ရှိနေပြီး အီးယူနိုင်ငံမှ ရောက်ရှိလာပါက၊ သင်သည် Base-Mulhouse လေဆိပ်သို့ တိုက်ရိုက်ပျံသန်းနိုင်သည်။ပြင်သစ်နှင့် ဆွစ်ဇာလန်နယ်စပ်တွင်ရှိပြီး Freiburg im Bresgau နှင့် ပိုမိုနီးကပ်သည်။ Basel လေဆိပ်နှင့် Freiburg ကြားတွင် မကြာခဏ ဘတ်စ်ကားဝန်ဆောင်မှုများ ရှိပါသည်။
အဲဒါကို စိတ်ထဲမှာ မှတ်ထားရမယ်။ အစီအစဉ်ဆွဲရန် လိုအပ်မည့် အများသူငှာ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကို အသုံးပြု၍ Black Forest သို့ သင်သွားရောက်လည်ပတ်ရန် ရည်ရွယ်ပါက၊. မြို့ကြီးတစ်မြို့ကို ပျံသန်းမယ် ဆိုရင်တော့ သုံးချင်မှ သုံးမယ်။ ဒေသဆိုင်ရာ ရထားလမ်းများ ခရီးစဉ်မှာ ပေါ်လာတဲ့ မြို့ငယ်လေးတွေဆီ ရောက်ဖို့။
ရှုခင်းကောင်းကောင်းနဲ့ ရထားစီးချင်တယ်ဆိုရင်တော့ အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုကတော့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့ပါပဲ။ Konus ကတ်သတ်မှတ်ထားသော တရားဝင်သက်တမ်းရှိသော ဧည့်သည်ကတ်ဖြစ်ပြီး သင့်အား ဒေသရထားများနှင့် ဘတ်စ်ကားများကို အသုံးပြုခွင့်ပေးသည်။ ထို့အပြင် Freiburg နှင့် Karlsruhe ၏ရထားများနှင့်ဘတ်စ်ကားများ။
ပိုက်ဆံရှိရင် ကားမောင်းရတာ ကြိုက်တယ်။ ကားငှားပြီး Black Forest ကိုစူးစမ်းလေ့လာနိုင်ပါတယ်။ အကြွင်းမဲ့လွတ်လပ်မှုနှင့်အတူ။ အငှားကုမ္ပဏီတွေ အများကြီးရှိတာကြောင့် ငှားလို့ရပြီး လေဆိပ်မှာ အသင့်စောင့်နေလိုက်ပါ။
Frankfurt မှ Black Forest ၏အနောက်ဘက်ရှိ Offenburg ကိုဖြတ်သော Autobahn A5 ကိုစီးသင့်သည်။ ဒေသအရှေ့ဘက်ခြမ်းရှိ ချိုင့်ဝှမ်းကိုဖြတ်၍ A81 ကိုလည်း သင်စီးနိုင်သည်။ လမ်းကြောင်းနှစ်ခုစလုံးသည် ဒေသတစ်ဝိုက်တွင် မောင်းနှင်ရန်အတွက် ကောင်းမွန်သောအစပြုနေရာများ ဖြစ်လာနိုင်သည်။
Black Forest ကို ဘယ်အချိန်မှာ သွားလည်သင့်လဲ။ Schwarzwald သည် တစ်နှစ်ပတ်လုံး သွားရမည့်နေရာဖြစ်သောကြောင့်၊ မင်းရဲ့အရသာပေါ် မူတည်လိမ့်မယ်။စက်ဘီးစီးခြင်း၊ နှင်းလျှောစီးခြင်း၊ နိုင်ငံဖြတ်ကျော်နှင်းလျှောစီးခြင်း၊ တောင်တက်ခြင်း? ကြိုက်တယ်ဆိုရင် တောင်တက် ပြီးရင် နွေရာသီမှာ သွားရမယ်။ အမြင့်ပေကြောင့် နွေဦးနှောင်းပိုင်းရောက်တာမို့ မတ်လအစမှာ တောင်ထိပ်တွေမှာ နှင်းတွေကျနေပါသေးတယ်။ သစ်ပင်ပန်းမန်တွေရဲ့ အလှကို မြင်ချင်ရင် ဧပြီလကုန်၊ မေလအစမှာ သွားရမယ်။
စက်ဘီးစီးခြင်း သို့မဟုတ် စုပေါင်းလမ်းလျှောက်ခြင်းအတွက် အကောင်းဆုံးသည် ဆောင်းဦးရာသီဖြစ်သည်။. ကြွေကျတဲ့အရောင်တွေက ထူးခြားတယ်၊ ပိုဆိုးတာက နှစ်ရှည်ပင်တွေရှိသေးတယ်ဆိုတော့ ဓာတ်ပုံတွေက အရမ်းကောင်းတယ်။ ထို့အပြင် အဆိုပါရက်စွဲများအတွက်လည်း ယဉ်ကျေးမှု ပွဲတော်များနှင့် ရိုးရာပွဲများ အမျိုးမျိုးရှိသည်။. ပြီးတော့ ဆောင်းရာသီမှာ ? ကောင်းပြီ၊ နှင်းတွေအများကြီးရှိတယ်။ နှင်းလျှောစီးပြိုင်ပွဲ၊ ခွေးစွတ်အပြေးပြိုင်ပွဲ၊ နှင်းလျော ဒါတွေအားလုံး ဟုတ်ပါတယ်၊ အခု ဒီဇင်ဘာလမှာ ခရစ္စမတ်ဈေးတွေက ကျက်သရေတိုးစေတဲ့ နေ့တစ်နေ့ပါပဲ။
Black Forest မှ ကျွမ်းကျင်သူများက ဤသို့ဆိုသည်။ စူးစမ်းလေ့လာရန် အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းမှာ တစ်နေရာတည်းတွင် အခြေစိုက်ပြီး ထိုနေရာမှ ခရီးများနှင့် လေ့လာရေးခရီးများ စီစဉ်ရန်ဖြစ်သည်။ ဤနေရာတွင် အလွန်နာမည်ကြီးသော ကျေးလက်နေရေးအချို့ကိုလည်း သင်ရွေးချယ်နိုင်သည်။ သေချာပေါက် ဈေးသက်သာတဲ့ Freiburg မှာနေဖို့ သင်ရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ၊ Kirchzarten။ အခြေချရာနေရာကို ရွေးချယ်ခြင်းသည် မည်သည့်ခရီးစဉ်ကို လိုက်နာရမည်ကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း မသိသောအခါတွင် ဤရွေးချယ်မှုသည် အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
ထို့နောက် ပထမအချက်မှာ သင်သွားရောက်ကြည့်ရှုလိုသော ဆိုက်များစာရင်းကို ပြုလုပ်ရန်ဖြစ်သည်။တတ်နိုင်သမျှ အတိုချုံးပါ။ စနေ၊ တစ်ပတ်၊ ဆယ့်ငါးရက်၊ ဟုတ်ပါတယ်၊ ပထမခရီးစဉ်မှာ အရာအားလုံးကို သင်ဘယ်တော့မှ မမြင်ရပါဘူး၊ ပိုက်လိုင်းထဲမှာ ကျန်ခဲ့တဲ့အရာတွေကို သင်ပြန်လိုချင်စေမယ့် အံ့သြဖွယ်နေရာတွေကို သံသယကင်းကင်းနဲ့ သင်တွေ့ပါလိမ့်မယ်။
Black Forest မှာရှိတဲ့ မြို့တွေကို ကြည့်ရအောင် Freiburgချစ်စရာကောင်းသော သမိုင်းဝင်ဖြစ်ရပ်တစ်ခုနှင့် ချစ်စရာကောင်းသော တက္ကသိုလ်မြို့လေးတစ်မြို့၊ လမ်းလျှောက်လမ်းများစွာရှိသည့် တောင်တန်းတစ်ခု၊ Titisee ရေကန် တစ်နာရီအောက် ခရီးတွင် ရထားဖြင့် သင်ရောက်လာသည်။ Y Baden- ဘာဒင်ရောမခေတ်ကတည်းက နာမည်ကြီး spa အပန်းဖြေစခန်း။ ထို့အပြင်၊ ဤမြို့သည် Schwarzwald အမျိုးသားဥယျာဉ်နှင့်အလွန်နီးကပ်သည်။ Black Forest အမျိုးသားဥယျာဉ်တောင်များ၊ ရေခဲအိုင်များနှင့် ရွာများရှိသည်။
တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ အခြားမြို့တစ်မြို့ဖြစ်သည်။ Freudenstadt၊ ၎င်း၏ဟောင်းနွမ်းသောရင်ပြင်၊ ဘယ်သောအခါမှမတည်ဆောက်ခဲ့သောရဲတိုက်နှင့်၎င်း၏ချစ်စရာကောင်းသော Gothic-Renaissance ဘုရားကျောင်း။ အပူပိုင်းမြို့လည်းဖြစ်သည်။ တစ်ဖက်ကလည်း ဝိုင်ယဉ်ကျေးမှုကို ကြိုက်တယ်ဆိုရင် လိုက်နာနိုင်ပါတယ်။ Baden Wine လမ်းကြောင်းအနီးနားရှိ Heidelberg၊ Freiburg နှင့် Baden Baden ကိုယ်တိုင်က စပျစ်ခြံများမှတဆင့်၊ ဒီမြို့တွေမှာ တည်းခိုခက ဈေးကြီးနိုင်တယ်ဆိုတာ အမြဲသတိရပါ၊ ဒါကြောင့် ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့စျေးနှုန်းတွေကို အမြဲတွေ့ရမှာပါ။
သင်တို့သည်လည်းသွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ် Stuttgart၊ Relo အမျိုးသားပြတိုက်j၊ နာမည်ကြီး cuckoo နာရီတွေကို ကြည့်ဖို့၊ Black Forest Open ပြတိုက်မိရိုးဖလာ စိုက်ပျိုးနည်းစနစ်များကို အချိန်နှင့်အမျှ တွေ့မြင်နိုင်သည်...
ဤဒေသမျိုးတွင် လမ်းလျှောက်ခြင်းသည် အမြဲရေပန်းစားသည်။ အမှန်တရားကတော့ တောနက်ထဲမှာ များပြားတဲ့ လမ်းကြောင်းတွေပါပဲ။ Baden-Baden၊ Freiburg မှ Offenburg မြို့များအားလုံးတွင် ခရီးရှည် သို့မဟုတ် တိုတောင်းသောလမ်းကြောင်းများပြုလုပ်ရန် မြေပုံများနှင့် ထပ်လောင်းအချက်အလက်များကို သင်ရရှိနိုင်သည့် ကိုယ်ပိုင်ခရီးသွားရုံးခန်းများရှိသည်။ ဤလမ်းကြောင်းအများစုသည် လိုက်ရန်လွယ်ကူပြီး အရောင်အမျိုးမျိုးဖြင့် အမှတ်အသားပြုထားသည်။− အဝါရောင်ရှိသော ဒေသဆိုင်ရာလမ်းများ၊ အပြာရောင်ရှိ ဒေသဆိုင်ရာလမ်းများနှင့် အနီရောင်ရှိ အဓိကလမ်းများ။
နွေရာသီတွင် တောင်တက်ခရီးသည်များ များပြားပြီး လမ်းကြောင်းတစ်လျှောက် အမြဲလိုလို တိုင်များရှိသည်။ တကယ်တော့ သင်ဟာ ဒီလှုပ်ရှားမှုကို နှစ်သက်သူတစ်ယောက်ဆိုရင်၊ သင်အမြဲတမ်း လမ်းလျှောက်ပြီး တဲထဲမှာ ဘယ်တော့မှ မအိပ်တတ်ပါဘူး။ ရယ် အကြောင်းအရာအလိုက် လမ်းကြောင်းတွေရှိတယ်။ ဒေသ၏အချို့သောရှုထောင့်နှင့်ဆက်ဆံခြင်း- လယ်ယာဘဝ၊ ကျော်ကြားသောဆွဲဆောင်မှုများ၊ ယဉ်ကျေးမှု၊ ဝိုင် ...
ဒါတွေကို ချရေးပါ။ လူကြိုက်များသောလမ်းကြောင်းများ:
Schwarzwaldhocstrasse- ၎င်းသည် အမြင့်ပေ၊ မြောက်ဘက်သို့ ရှေးအကျဆုံးလမ်းကြောင်းဖြစ်ပြီး ကောင်းမွန်သောမြင်ကွင်းကျယ်ရှုခင်းများကို အာရုံစိုက်ထားသည်။
Schwarzwald Panoramastrasse: ၎င်းသည် မြင့်မားသောတောင်တန်းများနှင့် ပိုကြီးကျယ်ခမ်းနားသော မြင်ကွင်းများပါရှိသော ရှုခင်းသာလမ်းကြောင်းဖြစ်သည်။
Badische Weinstrasse- အပူပိုင်းမြို့များစွာကို ဖြတ်ကျော်ပြီး spa ၏လမ်းကြောင်းဖြစ်သည်။
Klosterroute Nordsschwarzwald: ၎င်းသည် Black Forest မြောက်ဘက်ရှိ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းများ၏ လမ်းကြောင်းဖြစ်သည်။ World Heritage Maulbronn ဘုန်းကြီးကျောင်း အပါအဝင် လှပသော ဘုန်းကြီးကျောင်းများ ရှိသည်။
ဤအရာများသည် အကောင်းဆုံးလမ်းကြောင်းအချို့သာဖြစ်ပြီး Black Forest ကိုဖြတ်ကျော်သွားသော်လည်း၊ ထိုကဲ့သို့သော သီးသန့်လမ်းကြောင်းများမဟုတ်သော အခြားအချို့လည်းရှိသေးသည်။ ဂျာမန်လယ်ယာ လှုပ်ရှားမှုများ လမ်းကြောင်း, အ Hohenzollern လမ်းကြောင်း သို့မဟုတ် Neckar-Alb-Aare ရောမလမ်းကြောင်း ရောမအပျက်အစီးများ၊ လေဟာပြင်ပြတိုက်များနှင့် တူးဖော်မှုများ လွှမ်းခြုံထားသည်။
နောက်ဆုံးတွင်၊ နောက်ထပ်အကြံပြုချက်အချို့ Black Forest မှာ ရဲတိုက်ကို သွားကြည့်ရမယ်။ (ဥပမာ Eberstein ရဲတိုက်၊ Karlsruhe နန်းတော်၊ Hohengeroldseck၊ Hohenzollern စတိုင်၊ kaisers နှင့် ဘုရင်များ၊ ဥပမာအားဖြင့်) မင်းလည်းလုပ်ရမယ်။ ဓာတ်သတ္တု spa သို့သွားရောက်လည်ပတ်ပါ။ (ဤကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ ဆိုဒ် ၁၇ ခုရှိသည်)၊ လမျးလြှောကျသှား, ၎င်း၏ လေဟာပြင်ပြတိုက်များသို့ သွားရောက်ကာ သမိုင်းဝင်မိုင်းတွင်းသို့ ဝင်ပါ။ အလယ်ခေတ်နှင့် ရွာတွေ ဒါမှမဟုတ် မြို့ငယ်လေးတွေတောင် သွားလည်တယ်။ဥပမာအားဖြင့် Calw၊ Nagold Valley၊ အလွန်လှပသော၊ သို့မဟုတ် Bad Wildbad သို့မဟုတ် Breisach am Rhhein၊ Gangenbach ...
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ခရီးသွားသတင်း » Getaways ဥရောပ » Alemania » Black Forest သို့ ခရီးသွားရန် အကြံပြုချက်များ
Icod de los Vinos တွင် မြင်တွေ့ရမည့်အရာ